Facebook search အကြောင်း တစေ့တစောင်း
Computers & Technology » Facebook search အကြောင်း တစေ့တစောင်း	14
Posted by Myanmar Web Designer on May 11, 2015 in Computers & Technology | 14 comments
ဆောင်းပါး တစ်ခုခုရေးမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်ရင် မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေအတွက် အထောက်အကူဖြစ်လားလို့ အရင်စဉ်းစားပါတယ်။ အထောက်အကူဖြစ်မယ်ထင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို သိထားတာအပြင် လေ့လာဖြည့်စွက်ပြီး အပြည့်စုံဆုံးဖြစ်အောင် ရေးပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ တစ်ပုဒ်ဆို တစ်ပုဒ် အရသာပြည့်ဝအောင်လို့ပါ။ သိပ်မကြာသေးခင်ကလည်း ဒီ website မှာ “အင်တာနက် (မရှိမှ) ဆော့လို့ရမယ့် Google Chrome ရဲ့ လျှို့ဝှက်ဂိမ်း” ဆိုတာကို ရေးခဲ့ပါသေးတယ်။
Language ရွေးပြီးသွားရင်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာ အပိုင်း စတင်ပါပြီ။ Facebook search နဲ့ ရှာလို့ရတာတွေ အကုန် သုံးလို့ရပါပြီ။ ဒီနေရာမှာ ရှာတယ်ဆိုတာ လိုချင်တာရိုက်ပြီးရင် အောက်ကပုံထဲကအတိုင်း မှန်ဘီလူးလေးနဲ့ ပေါ်လာတဲ့စာတန်းကို နှိပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာတွေရှာလို့ရလဲဆိုရင် စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း အကုန်ရှာနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ပြောရရင် –
သူများမျက်လုံးနဲ့ ကမ္ဘာလှည့်မယ် ဆိုတာကတော့ ကိုယ်မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာတစ်ခုခုကို ရှာလိုက်ပါ။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေ ရောက်ဖူးတယ်ဆိုရင် သူတို့တင်ထားတာ မြင်ရပါမယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ် like လုပ်ထားတဲ့ page တွေက တင်ထားတယ်ဆိုရင် မြင်ရပါမယ်။ Google မှာရှာတာနဲ့ ကွာခြားချက်ကတော့ သူငယ်ချင်းတွေတင်ထားတာတို့၊ သာမာန်ဖုန်းနဲ့ ရိုက်တင်တာတို့ဆိုရင် ပိုပြီး သဘာဝကျကျ တွေ့ရပါမယ်။ ဒါပေမယ့် Google ကလည်း အတော်ကလေး အသုံးဝင်တဲ့ Search engine တစ်ခုပါပဲ။
အောက်မှာတော့ နယ်သာလန်ရဲ့ မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ Amsterdam ကိုရှာထားတာပါ။ ဆန်းသစ်တဲ့ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေကြောင့် နာမည်ကြီး လူသိများတဲ့ မြို့ပါ။
View all posts by Myanmar Web Designer →	Blog
တောင်ပေါ်သား says: OK…OK…..
ခင်ဇော် says: ကျေးးကျေးးပါ…
Alinsett @ Maung Thura says: .ဖွေးဖွေးကို ရှာတာ အတုတွေချည်း ထွက်လာတယ်
အစစ်ရှာနည်းလေးရော ပြောပြရင် ကောင်း၏
ပလို့ဂျိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 78
Myanmar Web Designer says: အစစ်ရှာနည်းရယ်လို့တော့ မရှိဘူးဗျ၊ ရှာလို့ ထွက်လာတဲ့ထဲက page တွေကို အောက်ပါအချက်တွေနဲ့ တိုက်စစ်လိုက်ပါ။
၁။ page နာမည်ဘေးမှာ အမှန်ခြစ် ပါ/မပါ (အမှန်ခြစ်ပါရင်တော့ အစစ်ဆိုတာ သေချာသွားပါပြီ)
၂။ like အများဆုံး နဲ့ ကြော်ငြာမတင်တဲ့ page ကို အစစ်လို့ မှတ်လိုက်ပါ။
ဖွေးဖွေးအစစ်ရဲ့ page ကတော့ https://www.facebook.com/phwayphway.for.fans မှာပါ။
Ma Ma says: သိပေမယ့် မသုံးဖူးသလောက်ရှိတာမို့ ဒီပိုစ့်က အကျိုးများ အသုံးတည့်တဲ့အပြင်….
နည်းပညာကို လွယ်ကူရှင်းလင်းစွာရေးသားရှင်းပြသွားလို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 78
Myanmar Web Designer says: အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …
naywoon ni says: မလုပ်​ပါနဲ့ဂျာ
ဆာ့ခ်ျ​အင်​ဂျင်​ဆိုတာ ဘာရှာရှာ ကြိုက်​တာ ရှာလို့ရတယ်​ဆိုပြီး အဲ့အ​ပေါက်​ထဲကို “က” ကြီး “ခ'” ​ကွေး ရိုက်​ပြီး ရှာပြလိုက်​တာ ဟီး လူကြားထဲ အရှက်​​တော်​ ဗျန်းဗျန်း ကွဲ ဖူးလို့ပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 78
Myanmar Web Designer says: အရင်တုန်းကတော့ မရှာဖူးဘူး၊ ခုတော့ Google မှာ ရှာလို့ရနေပါပြီဗျ။ အရင်လူတွေကို ပြန်ခေါ်လိုက်ပါဦး … :D
မြစပဲရိုး says: အဘနီ ပြောသလို “က” လို့ ရိုက် ရှာလိုက်တာ John C ဆိုပြီး ထွက်လာရော။ ရှိပြီးသား တွေ တောင် မျက်စိ နောက်လာပြီး ဘယ်လို ဖြုတ်သင့်တယ် တွေးနေတာ။
တစ်ချို့ကိုတော့ follow ကို disable လုပ်ထားရတယ်။
. အိုဗာလော်ဘီ ရွှယ်ဖား တွေ ဖြစ်နေလွန်းလို့။
ဒီလို ဗဟုသုတလေး တွေ မျှပေးလို့ ကျေးဇူးပါ မောင်ဝက် ရေ။
နာမည် လေး ကို မကြိုက် ရင် ခွေးလွှတ်ပြီး ခေါ်လို့ကောင်းမဲ့ နာမည် ပေးပါ။
အောင် မိုးသူ says: Search Engine ကိုတော့လေ အမျိုးမျိုးစမ်းသပ်ပြီးကြောင်း ဒီပို့စ်ကိုလည်း ဖတ်သွားကြောင်း။
ကထူးဆန်း says: gmail account ကို ဘဲ သိနေတာ ဆို ရင် ကော ဘယ်လို ရှာလို့ ရပါသလဲ
နောက်ပြီး နံမည် အသစ် ရိုက် ထည့် ပေမဲ့လည်း မပေါ် တာ တွေ ကော ဘယ်လို ရှာလို့ ရပါသလဲ ။ နံမည် တစ်ခု ရိုက်ထည့် ရင် ကိုယ့် သူငယ်ချင်း ထဲ က သူငယ်ချင်း ဖြစ် နေရမယ် မဟုတ်လား ။
face book အသစ် စလုပ် တဲ့ သူ အနေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ မရှိနိုင်သေးတဲ့ အခါမှ ဖြစ်တတ်တာပါ ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 78
Myanmar Web Designer says: Gmail လိပ်စာအတိုင်း ထည့်ပြီးရှာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးရှာမယ်ဆိုရင် ပိုပြီး တိတိကျကျ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Gmail လိပ်စာနဲ့ ရှာလို့မှ မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်တာ နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။
၁) တစ်ြခား Gmail အကောင့် (သို့) မဟုတ် ဖုန်းနံပါတ်ကို သုံးပြီး facebook ဖွင့်ထားတာ
၂) ရှာတဲ့အကောင့်နဲ့ ဖွင့်ထားပေမယ့်လို့ အကောင့်ပိုင်ရှင်က သူ့ကို Gmail နဲ့ ရှာလို့ မရအောင် ပိတ်ထားတာ
တို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် Facebook မသုံးတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မသုံးတဲ့လူကလွဲလို့ အဲလိုလူတွေ ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ ရှာချင်တဲ့လူက အောင်အောင်၊ သူအလုပ်လုပ်တာက မန္တလေး ဂေဇက်၊ နေတာက ရန်ကုန်မှာ နေတယ်ဆိုပါစို့ –
1) Aung Aung Mandalay Gazette
2) Aung Aung Yangon
3) အောင်အောင် Mandalay Gazette
စတာတွေနဲ့ ရှာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခြား သူတို့တက်တဲ့ကျောင်းတွေနဲ့လည်း တွဲပြီး ရှာနိုင်ပါတယ်။
Mr. MarGa says: search ကို သုံးတယ်ဗျ ဒါပေမင့် သိပ် စိတ်​တိုင်းမကျဘူး
ကိုယ်​ပဲ keyword တွေ တိတိကျကျ မထည့်လို့ လို့ပဲ မှတ်​လိုက်​ပါတယ်
ပို့စ် အတွက် ကျေးကျေးပါ ကိုရင်လူခါး
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: Facebook Search အကြောင်း ရေးပေးထားတာ
ခုက Facebook ခေတ် ဆိုတော့
Facebook သုံးနေရင်းနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ရှာလို့ ရနိုင်တာပ ….